आफ्नो श्रीमानलाइ छोडेर हिड्दा… भिडियो?? – Cn Chautari
Homeसमाचारआफ्नो श्रीमानलाइ छोडेर हिड्दा… भिडियो??
आफ्नो श्रीमानलाइ छोडेर हिड्दा… भिडियो??
February 15, 2021 admin समाचार 44899
आफैले रोजेको ।
केटासित उनले बिहे गरेकी थिइन् । सबथोक ठीकठाक चलिरहेको थियो । विवाह गरेको २ वर्षमै छोरी जन्मिएपछि उनको परिवार औधी खुसी थियो ।
तर श्रीमान श्रीमती दुवै बेरोजगार हुँदा परिवार चलाउन समस्या भयो । उनीहरूबीच बेला-बेला वि’वाद पनि हुन थाल्यो ।आर्थिक सम’स्याका कारण ।
परिवारमा त’ना’व भएपछि माइतीको सहयोगमा श्रीमान्लाई वै’देशिक रोजगारीमा पठाइन् ।यो कथा हो, ओखलढुंगाको फूलबारी गाविसकी २७ वर्षीया विमला राई ।
(नाम परिवर्तन) को । श्रीमान् वैदेशिक रोजगारीमा पठाएपछि विमला पनि काठमाडौंमै व्यवसाय गर्दै काकाकाकीसँगै बस्न थालिन् । उनी स्वयम्भूमा भाडामा बस्थिन् ।
घरबेटीकी छोरीको सहयोगमा विमलाले फेसबुक पनि चलाउन सिकिन् । त्यही फेसबुकबाट भएको चिनाजानी मायाप्रेममा बदलिएपछि उनी झन्डै बेचिने ।
अवस्थामा पुगेकी थिइन् भारतको दिल्लीमा काम गर्ने बैतडीका एक युवकले फेसबुकबाटै मायाप्रेमको नाटक गरेर काठमाडौं बाट महेन्द्रनगर बोलाई ।
ती युवतीलाई गड्डाचौकी नाका हुँदै भारततिर लग्दै गर्दा माइती नेपालले उद्धार गरेर आफन्तको जिम्मा लगाएको हो ।
हाम्रो एक वर्षअघि फेसबुकबाटै ।
परिचय भएको थियो,’ माइती नेपाल कक्षमा विमलाले भनिन्, ‘२/३ महिनासम्म दिनहुँ कुराकानी हुन थालेपछि उसले नै प्रेम प्रस्ताव गरेको थियो ।
विमलाले ती युवकलाई फेसबुकमा बाहेक अन्त कतै देखेकी थिइनन् । तर प्रेमले अ’न्धो बनाएपछि उनी कहिल्यै नदेखेको व्यक्तिले बोलाउँदा घर छाडेर हिँडिन् ।
‘बैतडी भनेको मध्यपश्चिमको पहाडी जिल्ला हो भनेको थियो उसले,’ विमलाले भनिन्, ‘दिल्लीमै पढाइ गरिरहेको छु, पढाइ सकेपछि बिहे गरेर घर लैजान्छु भनेको छ ।’
उनले ती युवकप्रति आफू वि’श्वस्त भएकाले धोका दिन नसक्ने बताइन् !बरु उसैसँग बिहे गरेर बैतडी जान तयार छु घर जाँदिनँ उनले भनिन् ।
माइती नेपालले शनिबार गड्डाचौकीबाट उ’द्धार गरेको हो । केटाको उमेर १७ वर्षमात्रै छ! माइती नेपाल कञ्चनपुर संयोजक महेश्वरी भट्टले भनिन्, ।
पैसा खायो भन्नेले bank को statement हेर्दा हुन्छ । स्वेता खड्काले हात झिक्नु भएको छैन । माझि बस्ती को यो भिडियो हेर्नुहोस
मलेसियामा नेपालि केटा ले लगे नेपालि केटिको ज्यान हेर्नुहोस
November 11, 2020 admin समाचार 10396
वैदेशिक रोजगारीको लागि मलेसियामा रहेको एक नेपाली महिलाको छुरा प्रहार गरि ह*त्या भएको छ। मलेसियाको क्लाङ शहरमा स्थित नेपाली रेष्टुरेन्टमा कार्यरत नेपाली युवति आरतिमाया (आरति) मगरको छु*रा प्रहार गरि हत्या गरिएको हो । पुरानो चिनजान
टिकटक र फेसबुकमा भाइरल भइरहेको भिडियोको दुलही , को हुन उनी ? (अन्तरवार्ता सहित)
December 11, 2020 admin समाचार 12964
‘पर्सी आइहाल्न्या हुँ खिरपुरी बनाइराख्नु। अचार पनि, धेरै खान्या हुँ। हिजो कम खाँ हुँ नी मैले ! धेरै खान्या हुँ। नरुनु।’ दुलहीले कारबाट आमालाई सम्झाउँदै । भनेको यो भिडियो अहिले निकै चर्चामा आएको छ। ‘विचार
गोरी महिलाले कालो बच्चा जन्माएपछि श्रीमानलाई लगाइन् अनौठो आरोप
December 1, 2020 admin समाचार 22066
काठमाडौ। संसारमा कहिले काँही निकै अचम्म लाग्दा खबर आउने गर्छन । हालै स्पेनवाट यस्तै अनौठो समाचार आएको छ। स्पेनमा एक गोरी महिलाले कालो बच्चा लाई जन्म दिएपछि । आफ्ना श्रीमानलाई अनौठो आ’रोप लगाइन्। पति पत्नीमा
यीनै हुन शिक्षकको कु.टाइबाट मृ.त्यु भएका १० वर्षीय कृष्णप्रसाद राजवंशी ! (51806)
सार्है दुःखद खबर दुवै हात नभएका ३ महिनाका बच्चाको निधन (51254)
प्रदेश बाट साहेबज्युको प्रेमिल पत्र (50845)
सडकमा मागेर खाने युवती बनिन् संसारकै एक उत्कृष्ट एक मोडल,हेर्नुहोस (50468)
आफ्नो श्रीमानलाइ छोडेर हिड्दा… भिडियो?? (44899)
साँढे*लाई उ’त्तेजि’त पार्ने औ’षधी मान्छे ले खाए*पछि…(भिडियो सहित) (43418)
LEX 18 agenda conversation: Job club (41509)